Maitiro Ekunyoresa Binance neBinance Referral Code RFMD5RRN Kuti Utore 35% Discount Mune Ekutengesa Mari » Crypto Asset Home
Maitiro Ekunyoresa Binance neBinance Referral Code RFMD5RRN Kuti Utore 35% Discount Mune Ekutengesa Mari
Maitiro Ekunyoresa Binance?
Nhanho 1: Shanyira Binance uye sarudza Kunyoresa kumusoro kurudyi kubhawa
Nhanho 2: Sarudza Referral ID kuti uzadze iyo Binance Referral ID kana Binance Referral Code RFMD5RRN
Nhanho 3: Zadza yako email kero, pasiwedhi, sarudza Ndakaverenga Mitemo yeSevhisi, uye tinya Gadzira Akaunti.
Nhanho 4: Enda kuAccount Dashibhodhi kuti ugone Kushandisa BNB kubhadhara mari (25% Discount)
Nhanho 5: Enda kuReferral yeakaunzi kuti utarise iyo 10% komisheni kickback / rebate nhoroondo
Chii chinonzi Binance Referral ID? Chii chinonzi Binance Referral Code?
Chii chinonzi BNB?
Mifananidzo Kuratidzira Nhanho Nhanho Nhungamiro Pane Maitiro Ekunyoresa Binance Referral Code RFMD5RRN
Ichi chinyorwa chinokuratidza nhanho nhanho yekuti unyore sei Binance neBinance Referral ID kana Referral Code RFMD5RRN.
Shanyira Binance neBinance Referral ID: RFMD5RRN
Uchishandisa webhurawuza rako, shanyira Binance uye sarudza Kunyoresa kumusoro kurudyi kubhawa kana tinya iyi link https://www.binance.com/en/register?ref=RFMD5RRN
Pane peji rekunyoresa account, sarudza Referral ID uye zadza iyo Binance Referral ID: RFMD5RRN. Iwe uchaona yako commission kickback chiyero che 10%. Uku kudzikisira mumari yekutengesa kunoshanda kwehupenyu hwese.
Ipapo, zadza yako email kero, pasiwedhi, uye sarudza ndakaverenga Mitemo yeSevhisi. Dzvanya Gadzira Akaundi. Iwe uchagamuchira account activation kodhi mune yako email uye mushure mekusimbisa uchishandisa account account kodhi, account yako yagadzirira.
Pinda muaccount yako uye enda kumusoro kurudyi kusarudza Akaunti uye sarudza Dashibhodhi. Bhura pasi pasi peDashboard uye gonesa Uchishandisa BNB kubhadhara mari kuti uwane yako yekuwedzera 25% dhisikaundi mumari yekutengesa kweupenyu hwese. Iwe uchatenga uye uchengetedze imwe BNB muaccount yako kuti unakirwe 25% dhisikaundi paunenge uchishandisa BNB kubhadhara mari yako yekutengesa.
Enda kurudyi kumusoro kuti usarudze Akaundi zvakare uye wobva wasarudza Referral. Bhura pasi kusvika pasi kana sarudza Mitero yeKomisheni Yakagovaniswa Nawe kuti utarise nhoroondo yeiyo 10% mubhadharo kickback / rebate. Iwe unoshandisa iyo Binance Referral ID: RFMD5RRN panguva yekunyoresa kweBinance account kuti unakirwe ne 10% mubhadharo kickback / rebate. NeKushandisa BNB kubhadhara mari inobvumidzwa, urikutora huwandu hwese 35% dhisikaundi mumari yekutengesa.
Binance Referral ID iri RFMD5RRN
Binance Referral Code iri RFMD5RRN
Nekushandisa iyi Binance Referral ID / Code panguva yeBinance account kunyoresa, iwe uchanakidzwa 10% yemari yekutengesa dhisikaundi / kickback / rebate kwehupenyu hwese. Shandisa BNB kubhadhara mari dzekutengesa kuti unakirwe nekuwedzera 25% yemutero mumari yekutengesa. Pakazara pane 35% yemutero mumari yekutengesa.
BNB ndiyo mari yemari yemadhora kana chiratidzo chakagadzirwa naBinance kuti isimbise gadziriro yeBinance. BNB ndeimwe yemari yepamusoro yedhijitari munyika. Unogona kushandisa BNB kubhadhara mari dzekutengesa muBinance kuti unakirwe 25% dhisikaundi mumari. Kune zvekare zvakawanda zveimwe kesi yekushandisa uye kushandiswa kweBNB, kusanganisira kubhadhara, kufamba, varaidzo, mabasa uye mari. Sekureva kwaBinance CEO Changpeng Zhao kana kupfuura anozivikanwa seCZ Binance, BNB ndeye Kuvaka, Tenga, Pisa #BNB
Binance ndeimwe yepasirose yepamusoro cryptocurrency kuchinjana kweBitcoin uye Altcoins ane huwandu hwepamusoro hwekutengesa. Binance inozivikanwa neFunds yayo ndeye SAFU. SAFU inomirira Chekuchengetedza Asset Fund yeVashandisi (SAFU), yakasikwa naBinance seinishuwarenzi homwe yekukurumidzira kuchengetedza ramangwana kufarira kwevashandisi vese.
Maitiro Ekunyoresa Binance Referral ID Kodhi RFMD5RRN